Myo Min Htet – Page2– Cele Channel
ပြင်ပကမ္ဘာအကြောင်းကို လုံးဝမသိသေးတဲ့ အင်ဒိုနီးရှား ကိုရိုဝေ လူရိုင်းမျိုးနွယ်များ
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ကိုရိုဝေလူရိုင်းမျိုးနွယ်တွေဟ ယနေ့ထက်ထိတိုင် ရိုးရာမပျက်ဘဲ တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ကမ္ဘာဦးခေတ်က ခေတ်စားခဲ့တဲ့ စုပေါင်းအမဲလိုက်ခြင်း၊ စုပေါင်းစားသုံးခြင်း၊ စုပေါင်းနေထိုင်ခြင်းဓလေ့ဟာ အခုအချိန်ထိ မပျောက်ကွယ်သေးဘူးလို့ Mirror သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ကိုရိုဝေလူမျိုးတွေအကြောင်းကို ကမ္ဘာက သိပေမယ့်၊ သူတို့ကတော့ သူတို့နေရာမှအပ အခြားကမ္ဘာရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကို လုံးဝမသိကြဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရိုးရာအတိုင်း သစ်ပင်တွေပေါ်မှာ အိမ်တွေဆောက်နေကြဆဲ ဖြစ်သလို၊ ခေတ်မီပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လည်း မရင်းနီးကြပါဘူး။ ကိုရိုဝေလူမျိုးတွေကို 1970 မှာ မျက်မှောက်ကမ္ဘာက လူတွေက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ သူတို့ဟာ ထိုစဉ်တုန်းကတည်း အသားထဲကို ထိုးဖောက်ထည့်သွင်းပြီး ၀တ်ဆင်ရတဲ့ နားဆွဲ၊ နားတောင်း စတာတွေကို အခုအချိန်ထိ ၀တ်ဆင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို အိတ်တွေ၊ ပိုက်တွေနဲ့ထည့်ပြီး နောက်ကျောမှာ ပိုပြီး […]
နာမည်ကျော် မင်းသမီးဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီ နန္ဒာလှိုင်ကတော့ သူ့ရဲ့ ယောက်ျားဖြစ်သူ ဦးဇေသီဟလုပ်နေတဲ့ wlc လက်ဝှေ့ပြိုင်ပွဲနဲ့ပက်သက်ပြီး ယောက်ျားကိုပဲ သနားမိတဲ့အကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ ဒီအကြောင်း သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ မနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ကပဲ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေ မလုပ်ဖြစ် ပွဲတွေမတက်ဖြစ်တော့တဲ့ နန္ဒာလှိုင်က စီးပွားရေးပဲ စောက်ချလုပ်ကိုင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေရဲ့ သားဖြစ်သူ ဇေသီဟနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ဝေးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ညကတော့ သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်မှာ ယောကျာ်းကိုဘဲသနားတယ် ငွေအကုန်ခံ အပင်ပန်းခံ ပြီးတော့လဲစိတ်ချမ်းသာရတယ်မရှိဘူး စိတ်ညစ်နေရတာဘဲတွေ့နေရတယ် ဘာကြောင့်များအဲဒါကြီးကိုဖက်တွယ်နေရတာလဲ ဆိုပြီး ရေးသားထားပါတယ်။ သူမက ၁၉၉၈ ခုနှစ်က ရွှေနံ့သာစံအိမ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့နေရာမှ အကယ်ဒမီရရှိခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမအသက်က […]
အသက် ၄၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို တစ်ယောက်တည်း ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ မြတ်ကေသီအောင်
နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကယ်ဒမီမြတ်ကေသီအောင်ကတော့ သူမရဲ့ အသက် ၄၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကိုတစ်ယောက်တည်း ကျင်းပခဲ့ရတယ်လို့ ပြောလာပါတယ်။ ဒီအကြောင်း သတင်းကို သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာမှာ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့အတူ ရေးသားဖော်ပြထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Happy Birthday to Me46 ပြည့် မွေးနေ့ ကိုယ်တယောက်ထဲပေါ့. ဘယ်သူ့မှ ဘေးမှာမရှိပေမဲ့ရှိနေစေချင်တဲ့သူကတော့ ရင်ဘတ်ကြီး ထဲရှိတာပေါ့. ဒါပေမဲ့လည်းလေတယောက်နဲ့ တယောက် ဆုံကြရတာဟာ ရေစက်ဆိုပေမဲ့ တခါတလေမှာ အဲ့ရေစက် တွေက ဝဠ်ကြွေးဆပ်ဖို့အတွက် ဖြစ်လာမယ် ဆိုရင်တော့ တယောက်ထဲပဲ ကောင်းပါတယ် ဆိုပြီး မြတ်ကေသီအောင်က ရင်ဖွင့်ရေးသားထားပါတယ်။ မြတ်ကေသီအောင်က ရင်ထဲကဆောင်းရာသီ၊ ချစ်ခြင်းဖွဲ့မေတ္တာ ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားများနဲ့ အကယ်ဒမီရခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ အနုပညာလောကနဲ့ ဝေးသွားခဲ့ပြီး ပရိတ်သတ်ရှေ့က နှစ်များစွာ […]
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း သရုပ်ဆောင် ၀ါရင့်မင်းသမီး ခင်ဇာခြည်ကျော်တစ်ယောက် လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကြားနေရပါတယ်။ သူမရဲ့ ချစ်သူက လက်၇ှိမှာတော့ ပြည်ပမှာနေထိုင်ပြီး သူမတို့နှစ်ယောက်ဟာ စိတ်တူကိုယ်တူ အနုပညာဝါသနာပါသူတွေဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ အလုပ်တွေကိုလဲ အဝေးကနေ ပံ့ပိုးကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမဟာ ကလေးနှစ်ယောက် မိခင်ဖြစ်ပေမယ့် နုပျိုလှပဆဲပါဘဲ။ သူမရဲ့ သားနဲ့ သမီးကလဲ သူမနဲ့ တူလို့ အရမ်းကိုချောကြလှကြပါတယ်။ သူမက လက်ထပ်ဖို့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ” ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထဲမှာတော့ မဖြစ်သေးပါဘူး၊ ရုပ်ရှင်ကားတွေလဲရိုက်စရာရှိသေးတော့ အလုပ်တွေလဲမပြီးသေးဘူး၊ လုပ်ဖြစ်ဖို့ အစီအစဉ်ဆွဲပြီးတဲ့ အခါကြ ရင်တော့ ပရိသတ်ကြီးကိုပြောမှာပါ ” ဆိုပြီး အွန်လိုင်းမီဒီယာတစ်ခုရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ခုလိုဘဲဖြေကြား သွားခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ချစ်သူများနေ့တုန်းကလဲ ချစ်သူကပေးတဲ့ ပန်းစည်းနဲ့ iphone […]
ဆံပင်အတိုညှပ်ပြီး ပုံစံပြောင်းခဲ့တဲ့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်
မင်းသမီးချော ၀တ်မှုန်ရွှေရည်ကတော့ ပရိသတ်ချစ် ထိပ်တန်းမင်းသမီတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုလည်း အဆက်မပြတ်ရိုက်ကူးနေသလိုလက်ရှိမှာလည်း ကြော်ငြာဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ လတ်တလောက Dress Gallery ဆိုင်ကြော်ငြာအတွက် ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီပုံတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အခုမှာတော့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်ဟာ ” ရန်သူ ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ဇာတ်ကောင်ကာရိုက်တာ ပီပြင်အောင် ယောကျာ်းလေးဆံပင်ပုံစံညှပ်ပြီး ပုံစံပြောင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ၀တ်မှုန်ရွှေရည် ချစ်စရာအမှုအရာနဲ့ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်စွမ်းရည်ကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုများစွားပိုင်ဆိုင်ထားရသူပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်က ပုံရိပ်တွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မိန်းကလေးဆန်ဆန်၊ ဖက်ရှင်မိုက်မိုက်ဝတ်တတ်တဲ့ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်ကို ယောကျာ်းလေးပုံစံမျိုးတွေ့ရမယ့် ဒီဇာတ်ကားကတော့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်ကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း သူမကို အားပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိလို့နေပါတယ်။ source : Wutt Hmone Shwe Yi
မိန်းမ ရချင်လွန်းတဲ့ လူပျိုကြီးကို ဗဒင်ဆရာက ကြက်နဲ့ ယတြာချေခိုင်းလိုက်သောအခါ
ဖတ်ပြီးမရီကြနဲ့နော်… ဒါဗြဲ လူပျိုကြီး ‘ဂေါက်ကြီး ‘တစ်ယောက် ခုထိမိန်းမ မရသေးတော့ ဗေဒင်ဆရာက ယတြာချေတဲ့အနေနဲ့ ကြက်မတစ်ကောင် အမြဲဆောင်ထားဖို့ မှာထားတယ်။ သူ့ခမျာ မိန်းမလိုချင်ရှာတော့ ဗေဒင်ဆရာခိုင်းတဲ့အတိုင်း သွားလေရာ ကြက်မကြီးတကိုင်ကိုင်နဲ့။ ဒီနေ့တော့ သူရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာ ရုံပေါက်စောင့်က ကြက်မကြီးကို အထဲ ယူခွင့်မပြုဘူးတဲ့လေ။ “ရုံထဲကို တိရိစ္ဆာန်တွေ ခေါ်သွားလို့ မရပါဘူးခမျာ” ဒါနဲ့… လူပျိုကြီးလဲ အိမ်သာထဲသွားပြီး ကြက်မကြီးကို သူ့ဘောင်းဘီရှေ့ကြားထဲ ထည့်လိုက်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ ရုံထဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဝင်သွားတယ်။ အပေါက်စောင့်ကလည်း သူ့လက်ထဲ ကြက်မကြီး ပွေ့လာတာမတွေ့တော့ ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တာပေါ့။ ရုံထဲရောက်လို့ ဇာတ်ကားစပြတော့ သူ့ဘောင်းဘီဇစ်ကိုဆွဲချလိုက်ပြီး ကြက်မကြီးရဲ့ခေါင်းကို အပြင်ခဏထုတ်ပေးထားလိုက်တယ်။ ဒါမှ ကြက်မကြီး အသက်ရှူချောင်မှာကိုး။ ပြသနာက သူ့ဘေးကပ်လျက်ခုံက မိန်းမ၊ ကပ်လျက်ခုံကမိန်းမက သူနဲ့အဖော်ပါလာတဲ့ […]
အနုပညာလောကထဲကို ၀င်လာတဲ့အခါ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ အများကြီးပဲ ဘာလို့ဆို ကျွန်တော်က မျိုးရိုးလဲမရှိဘူး ကိုယ့်ဘာကိုယ်ကြိုးစားပြီးမှရတာ အောက်ခြေကလာတာ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အရင်တုန်းကဆို ငွေကြေးလဲမရှိဘူး ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတဲ့ ဘ၀ကြီးကလာတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်က Funny Video စရိုက်တုန်းကဆို ကျွန်တော့်မှာကိုယ်ပိုင်ဖုန်းဆိုတာမရှိဘူး အဲ့တုန်းက အလုပ်လုပ်တယ် အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဖုန်း ကျွန်တော်ဒီနေ့ထိ သိမ်းထားတုန်း အဲ့ဖုန်းကဘယ်လောက်မှမတန်ပါဘူး ၃ သောင်းပဲတန်တယ် အဲ့ဖုန်းလေး ပထမဦးဆုံးဝယ်တာပေါ့ အဲ့ဖုန်းလေးရတုန်းကဆိုရင် Video ရိုက်ဖို့အတွက်ကိုယ့်မှာပိုင်ဆိုင်တာဆိုလို့ Memory Card တစ်ခုပဲရှိတယ် မ၀ယ်နိုင်ဘူး အိမ်ကလဲမ၀ယ်ပေးဘူး အဲ့လောက်ထိပိုက်ဆံရှိတဲ့အသိုင်းဝိုင်းလဲမဟုတ်ဖူး အဆင်မပြေဘူးပေါ့ ဒီ Memory Card တစ်ကတ်နဲ့ သူငယ်ချင်းဆီကဖုန်းကိုငှား သူ့ဖုန်းကိုယူ ကိုယ့်အကောင့်ကိုဝင်ပြီး ရိုက်ပြီးထားသမျှကို သူ့ဖုန်းနဲ့ပဲတင်တာ ကိုယ့်မှာဖုန်းမရှိတော့ နောက်ပိုင်း Video တစ်ခု […]
Posted on February 19, 2018 February 19, 2018 Author Myo Min Htet	Comment(0)